Anyị enwere ike iji AirPod anyị n'ụgbọ elu? | Esi m mac
Anyị enwere ike iji AirPod anyị n'ụgbọ elu?
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Ngwa, ọtụtụ
Gbọ elu na-agbanwe mgbe niile. Ọdịdị nke ekwentị mkpanaka jidere ha n'ụkwụ, na mbụ enweghị ike iji ha mee ihe n'oge ụgbọ elu ahụ. N'ikpeazụ iwu a na-adị jụụ, ebe ụgbọelu ọhụrụ nwere teknụzụ iji zere nnyonye anya na ngwaọrụ.
Yabụ, ọ bụrụ na n'oge ụgbọ elu mkpa chọrọ igbu oge na-ege egwu ma ọ bụ na-ele vidiyo na Mac anyị na AirPods, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo echiche. Imirikiti ụgbọ elu na-amachibido iji ekweisi Bluetooth, mgbe ụfọdụ, ewepu ya ewepu.
Air Canada, dịka ọmụmaatụ, na-enye ohere iji AirPods mee ihe n'ụgbọ elu dị mkpụmkpụ na ọ bụ naanị n ’elu ebe ugwu 10. Anyị makwaara ihe atụ nke Air France, ebe ozugbo ụgbọelu emechi ụzọ, na machibidoro ojiji nke ekweisi ikuku na-emetụta ndị niile bi na ya. Linelọ ọrụ ụgbọ elu ahụ kwuru na ngwaọrụ eletrọniki enwere ike iwepụta data, ma ọ bụ Wi-Fi, Bluetooth, GSM, wdg. Ha ga-apụ n'oge ụgbọ elu ahụ niile.
Ruo taa, ndị njem ụgbọ elu na-eji AirPods n'otu oge (ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ site na ụdị ndị ọzọ) ha dị ụkọ. Nke a bụ otu ihe kpatara ụgbọ elu anaghị eche ịchọta ihe ngwọta. Laghachi na mmalite nke isiokwu: ọ ga-ewe ọtụtụ ọnwa ruo mgbe ọ dakọtara ofufe na Apple Bluetooth ekweisi. Ruo oge ahụ, anyị na-atụ aro ka ị buru EarPods ndụ anyị na akpa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Anyị enwere ike iji AirPod anyị n'ụgbọ elu?
Site na Syberia ruo ọnwa na egwuregwu ọhụrụ abụọ a maka ngwụsị izu
Ebe mgbakọ ebe a ga-eme WWDC bidoro chọọ mma